Post Top Light - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Post Top Light)
duziri ihe nkedo dị elu 100W
duziri ihe nkedo dị elu 100W Njirimara: 1. Nchebe ndi mmadu na ndi mmadu, ndi mmadu nwere ike ime gburugburu ebe obibi. 2.Otu jijiji, mgbochi mmiri, enweghị ntighari, enweghị ihe ọkụ, na-echebe anya gị. 3.N'iko siri ike ma kwụsie ike, ọ dịghị ụgwọ ọrụ ọ bụla. 4.Ibu akwa ibe ya. 5. Voltage na-arụ ọrụ AC100-277V....
100W wee jiri foto foto kpuchie ogige post n'elu
100W wee jiri foto foto kpuchie ogige post n'elu Njirimara: 1. Nchebe ndi mmadu na ndi mmadu, ndi mmadu nwere ike ime gburugburu ebe obibi. 2.Otu jijiji, mgbochi mmiri, enweghị ntighari, enweghị ihe ọkụ, na-echebe anya gị. 3.N'iko siri ike ma kwụsie ike, ọ dịghị ụgwọ ọrụ ọ bụla. 4.Ibu akwa ibe ya. 5. Voltage...
eduzi elu 50W na-eduzi ìhè na-adọba ụgbọala
eduzi elu 50W na-eduzi ìhè na-adọba ụgbọala Ọ dịghị mkpa iji aka na-arụ ọrụ 50W na-eduzi Post Top ìhè dị ka igwe na-arụ ọrụ na ụtụtụ photocell na-achọpụta ìhè iji mee ka ọ gbanyụọ. Ẹkot na omenala 250W ìhè fixtures, Mere ebe osisi Light enye gị ike ịrụ ọrụ nke ọma 9750lm super elu nchapụta na oji pụtara ìhè mere Post...
Post Top Light Post Top Lighting 75W Post Top Light Post Top Light Fitit Solar Post Top Lights post top light 30W DLC Post Top Light Uhie Post Top Light 50w